တရုတ်နိုင်ငံသို့ စာသွားသင်သည့် မြန်မာ ကျောင်းသားများ စက်လှေမှောက်၍ပျောက်ဆုံးနေ
တရုတ်နိုင်ငံသို့ မဲခေါင်မြစ်ဖြတ်၍ ကျောင်းသွားတက် သည့် မြန်မာ ကလေးငယ် ၁၄ ဦးမှာ ၂-၉-၂၀၁၂ ရက်က စက်လှေ နစ်၍ သေဆုံး ခဲ့ရကြောင်း ၅-၉-၂၀၁၂ ရက်က သိရသည်။ တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်အနီးရှိ မိုင်းလား ၄ နယ်မြေမှ ကလေးငယ်များဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံသို့ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေမှ သောကြာနေ့အထိ သွားရောက်ကာ စာသင်ကြားနေသော မြန်မာကျောင်းသားများ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ စီးနင်းလာသော စက်လှေမှာ ခရီးသည် ၃၀ ကျော် ပါဝင်ပြီး ၂၂ ဦးမှာ သေဆုံးခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
ကျွန်တော် “မေ ပိုက်ဆံမရှိတော့ဘူး၊ ငွေလွဲပေးပါဦး။”
ကျွန်တော် “ ၂ သောင်း”
အဖေ “ ၃သောင်းလွဲပေးလိုက်၊ ဒီကောင်ကျောင်းမှာဇယားတွေရှုပ်တယ်၊ ကျန်းမာရေးလဲဂရုစိုက်ဦး။”
ကျွန်တော် “သားအတန်းတက်တော့မယ်၊ ငွေမြန်မြန်လွဲပေးနော်။”
နောက်နေ့ ငွေ ၅သောင်းလွဲလာပေးခဲ့တယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ဖြစ်သော စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်တွင် စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများ ကျင်ပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိ
"ရန်ကုန်က လူနှစ်ရာ့ငါးဆယ်လောက်နဲ့ နေပြည်တော်ကို နေ့ချင်းပြန်သွားမယ်။ သမ္မတအိမ်တော်ရယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးရှေ့တွေမှာ လူထုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲလုပ်မယ်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ စစ်ပွဲတွေရပ်ဖို့ တောင်းဆိုမယ်" ဟုကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မှ ဒေါ်အက်စတာက စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် မီဒီယာများအား ရှင်းလင်းပြော ကြားသည်။
နိုင်ငံတခုရဲ့ စံတန်ဘိုးတွေဟာ နယ်ကျော်သွားရင် တခြားသူအတွက် ပြသာနာတွေ တက်နိုင်သလား။
အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦး ရိုက်ကူးပြသနေတဲ့ " Desert Warriors" ရုပ်ရှင်ကားအပေါ် အာရပ်ကမ္ဘာက မကြေမနပ် ဖြစ်နေပြီး အရှေ.အလယ်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံတိုင်းနည်းပါ အမေရိကန် ဆန်.ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်နေပါသည်။ ဒီအခြေအနေဟာ အမေရိကန် အစိုးရအတွက် ရတက်မအေးရတဲ့ အခြေ အနေပါ။ အမေရိကန် သံတမန်နဲ. အမေရိကန် အကျိုးစီးပွားတွေကို လုံခြုံဖို. တဖက်က ကာ ကွယ်ပေးဖို. ကြီးမားတဲ့ လုံခြုံရေး ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နေသလို တဖက်မှာလည်း အမေရီကန် အကျိုးစီးပွားတွက် အာရပ်နိုင်ငံတချို.နဲ. ဆက်ဆံရေးတွေ တင်းမာ ပျက်ဆီးမှာကိုလည်း စိုးရိမ် နေရတာပါ။
အီဂျစ် နိုင်ငံရှိ တစ်ချိန်က ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဖြစ်သူ Ahmed Nazif မှာ သမ္မတ ဟိုစနီမူဘာရက် လက်ထက်တွင် တရားမဝင်သည့် ငွေကြေး အမြတ်အစွန်းများ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့မှုဖြင့် တရားစွဲဆို ခံခဲ့ရကာ ကြာသပတေး နေ့က ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့၌ မြို့တွင်း တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဆန်ဈေးမှာ တစ်အိတ်လျှင် ကျပ်ငါးသောင်းအထိ မြင့်တက်လာကြောင်း ဒေသခံများထံက သိရှိရသည်။
စက်တင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက ဖားကန့်မြို့လယ် မော်ဝမ်းကြီးနှင့် မော်ဝမ်းလေး ရပ်ကွက်နှင့် ဧရာဦးဆေးဆိုင်ရှေ့တွင် တပ်မ(၃၃)နှင့် KIOအဖွဲ့တို့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုဂျင်မီက အဖမ်းဆီးခံထားရသည့် မသွဲ့သွဲ့ဝင်း၊ မဖြူဖြူဝင်း၊ မအေးနက်တို့ကို ယနေ့တွင်ပြန်လွတ်ပေးဖွယ်ရှိကြောင်း ယနေ့၁နာရီခန့် တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေးနှင့် တွေ့ဆုံအပြီး ဧရာဝတီကို ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 14:11 1 comment:
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးခရိုင် တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ဆက်သွားရဲစခန်းပိုင် ရဲစခန်း အနောက်မြောက် ဘက် ၁၇ မိုင်ခန့် အကွာ ယာကြီးတောအုပ်စုကွင်းပေါင်းကျေးရွာတွင် လူသတ်မှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့သည်။
၎င်းနှင့် ချစ်သူများအဖြစ်မှ ပြတ်စဲခဲ့သော ဗင်နက်ဆာ ပရာဒစ်၏ စံအိမ်ကြီးကို ဟောလီးဝုဒ်မင်းသား ဂျွန်နီဒိပ်က ဝယ်ယူလိုက်ကြောင်း သိရှိရသည်။ Pirates of Caribbeanစတား ဇာတ်ဆောင် မင်းသားနှင့် ပြင်သစ် မင်းသမီးတို့သည် ဇွန်လအတွင်းက မိမိတို့၏ (၁၄)နှစ်ကြာ အချစ်ရေး အဆုံးသတ်ပြီ ဟု ကြေညာခဲ့သည်။
ဆေးပညာရှင် သုတေသီများ၏ လေ့လာတွေ့ ရှိချက်အရ ပီကေအားစားရင်းဖြင့် မတော်တဆ မျိုချပါက အူတွင်းမှ အစာအိမ်အတွင်း သို့ခုနစ်နာရီ အတွင်း ဖြတ်ကျော်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ဂျပန်အစိုးရကဝယ်ယူရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည့် တရုတ်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားလျက်ရှိသော ကျွန်းများ အနီးသို့ တရုတ်စစ်သဘောင်္ ၆ စင်းဝင်ရောက်သွားကြောင်း ဘီဘီစီ သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ ကင်းလှည့်စစ်သဘောင်္များသည် တရုတ်အခေါ် ဒိုင်အိုယု ဂျပန်အခေါ် ဆန်ကကု ဟုခေါ်သော ကျွန်းများတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိစေရန် လှည့်လည်စောင့်ကြည့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာဒုက္ခသည် တစ်သိန်းကျော် တစ်နှစ်အတွင်းပြန်ဖွယ်ရှိ
ဘန်ကောက်၊ စက်တင်ဘာ - ၁၄
မြန်မာနှင့်ထိုင်းအစိုးရတို့အကြားဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိနေသော မြန်မာဒုက္ခသည် တစ်သိန်းနှစ်သောင်းခန့်သည် တစ်နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်ဖွယ်ရှိကြောင်း ထိုင်းအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီNSC၏ပြောကြားချက်ကို CNA သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။
GSMဖုန်းများ ကျပ်တစ်သိန်း ဝန်းကျင်ဖြင့်လာမည့်နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ရောင်းမည်
လာမည့် ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ဦးပိုင်းတွင် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို ကျပ်တစ်သိန်း ဝန်းကျင်ဖြင့် ရောင်းချပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်သည်။
ဦးကျော်မောင်ချေ အသုဘတွင် လူသတ်တရားခံ အစစ်အမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ပေးရန် ပြည်သူများ တောင်းဆို
ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သော ဦးကျော်မောင်ချေ အသုဘတွင် သူ့အား သတ်ဖြတ်သူ တရားခံ အစစ် အမှန်များကို ဖေါ်ထုတ်ပေးရန် အသုဘ လာသူများက ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်ပြီး တောင်း ဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ABSDF(မြောက်ပိုင်း) ပါဂျောင်စခန်းတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော တပ်တွင်း ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ပက်သက်၍ သတ်ဖြတ်ခံရသော မြောက်ပိုင်းရဲဘော်တို့၏ မိသားစုဝင်များနှင့် လွတ်မြောက်လာသူအချို့၏ တရားစွဲဆိုမှု အပေါ် ABSDF ဥက္ကဋ္ဌဟောင်း မိုးသီးဇွန်ရင်ဆိုင်သင့်သည်ဟု မြောက်ပိုင်းမှ လွတ်မြောက် လာသော ABSDF အဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဦးညီညီကျော် က ပြောကြားသည်။
ABSDF အဖွဲ့တွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် တာဝန်ရှိသော ဒေါက်တာနိုင်အောင်နှင့် မိုးသီးဇွန် တို့သည် တရားစွဲဆိုခြင်းကို ရင်ဆိုင်မှသာလျှင် ဖုံးကွယ်ခြင်းခံရသော အဖြစ်မှန် ပေါ်ထွက် လာ မည်ဖြစ်ေ ကြာင်းနှင့် မြောက်ပိုင်းပြဿနာနှင့် ပက်သက်၍ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ အပြင် ပြန့်ကျဲ နေသော ရဲဘော် များနှင့်မိသားစုဝင်များ ပြန်လည်စုစည်းနိုင်ရန်အတွက် အထူးခုံရုံးတစ်ရပ်လည်း ဖွဲ့စည်း ထားကြောင်း သိရသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကြောင့် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့သည့် သမိုင်းဝင် သာသနအဆောက်အဦး ပျောက်ကွယ်တော့မည်
အစ္စရေးတပ်မတော်မှ Golan Heights ကုန်းမြင့်ဒေသတွင် စစ်ရေးလေ့ကျင့်နေမှုအား ယခုကဲ့သို့ တွေ့မြင်ရသည်။ Golan Heights ကုန်းမြင့်ဒေသသည် ယခင်က ဆီးရီးယားပိုင်ဖြစ်ပြီး ၁၉၆၇ ဇွန်လတွင် စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားပြီး အစ္စရေးတို့ သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု တခုအဖြစ် တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် ၁၃ ခုမှ အဖွဲ့ဝင်လူငယ်များကို ပထမဆုံးအကြိမ် ၁၅ ရက်ကြာ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းပေးရာ ယမန်နေ့က သင်တန်းပြီးဆုံးသည်။
“ ကျောက်ဖြူ-ကူမင်းရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တရုတ်နိင်ငံတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဘာသာရပ် မြန်မာကျောင်းသား ၅၈ဦးသင်ယူနေ”
တရုတ်နိင်ငံချန်ဒူးမြို့တွင်ဖွင်လှစ်ထားသည့်SOUTHWEST PETROLEUMတက္ကသိုလ်တွင်သင်ကြားပေးနေ သည့်ရေနံနှင့်သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးဘာသာရပ် ကို မြန်မာကျောင်းသား၅၈ဦးတက်ရောက်သင်ကြားနေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
Eleven Media Group ၏ www.elevenmyanmar.com အင်္ဂလိပ်ဘာသာဝက်ဘ်ဆိုက်သစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် စတင်မိတ်ဆက်ပြီး တရားဝင်လွှင့်တင်
Eleven Media Group ၏ သတင်းများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖေါ်ပြမည့် www.elevenmyanmar.com ဝက်ဘ်ဆိုက်သစ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ The Nation Multimedia Group ရုံးချုပ်တွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်နေ့က စတင်မိတ်ဆက်ပြီး တရားဝင် လွှင့်တင်ခဲ့သည်။
“မုံရွာလက်ပံတန်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အဖမ်းခံရသူ အမျိုးသမီး၃ဦး ယနေ့ နေ့လည်တွင် ပြန်လွတ်နိင်”
စက်တင်ဘာ၁၀ရက်က မုံရွာဆုတောင်းပြည့်ဘုရားတွင် လက်ပံတန်းတောင် ကြေနီစီမံကိန်းအတွက် ဆုတောင်းရန်လာသူဒေသခံများအနက် အဖမ်းခံရသူ အမျိုးသမီး၃ဦးကို ယနေ့ နေ့လည် ၂နာရီခန့် တွင်ပြန်လွှတ်နိင်သည်ဟုပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း(မုံရွာ)မှကိုသက်ဆွေအေးကပြောသည်။
ယင်းကိစ္စအတွက်ပုလဲမြို့နယ်ပြည့်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်ခင်စန်းလှိုင်(NLD)နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေ သကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးသာအေးတို့ ဆွေးနွေးလျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
“ MPU ရုံးနှင့် ဒေတာစင်တာ ဗဟိုဘဏ်တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်”
MPU ရုံးနှင့် ယင်းကဒ်စနစ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးမည့် ဒေတာစင်တာဖွင့်ပွဲကို စက်တင်ဘာ ၁၄ရက် ယနေ့ နံနက်တွင် ဗဟိုဘဏ်ဒေတာစင်တာ အဆောက်အအုံ၌ကျင်းပခဲ့သည်။
MPU ကဒ်စနစ်အား ပြည်တွင်းရှိ ဘဏ် ၇ ခုမှာ ကန်ဒေါ်လာ လေးသန်းရင်းနှီးမတည်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပြီး အဆိုပါဒေတာစင်တာအား နေပြည်တော်တွင်လည်း တည်ဆောက်သွားရန်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ယနေ့ကျင်းပသော ဖွင့်ပွဲသို့ ဘဏ္ဍာအခွန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီ ဦးဝင်းရှိန်၊သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဌ ဦးသန်းငြိမ်းတို့မှ တက်ရောက်ဖွင့် လှစ်ပေး ခဲ့သည်။
ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းရှိတဲ့ လက်ပံတောင်းတာင်ကို မုံရွာဘက်က တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်က စစ်ကိုင်းတိုင်း ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ တည်ရှိတာပါ။
မြန်မာပြည်မှာသာ Honda Insight ကို အတွေ့များတာပါ။ အမှန်တကယ် ကမ္ဘာမှာ ရောင်း အားကောင်းပြီး အောင်မြင်နေတာက Toyota ရဲ့  Hybrid ကား -Prius ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ယနေ့တိုင် ထုတ်လုပ် လျက်ရှိတဲ့ ကားဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာလည်း မော်ဒယ်မြင့် Prius အချို့ ရှိနေပါ တယ်။ မော်ဒယ်မြင့် အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၈၀၀ စီစီ ရှိနေတဲ့အတွက် သိန်း ၁၀၀ဝ ဝန်းကျင်ရှိနိုင်မယ့်ကားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ မော်ဒယ် မူရင်းရောင်းဈေးတောင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ သောင်းခွဲ အောက်မှာပဲ ရှိပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့ တွက်ရင် သိန်း ၂၀၀ ဝန်းကျင်သာသာပါ။ သို့ပေမယ့် မော်ဒယ်က ၂၀၀၇ အထက်ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်ပါဝါများတဲ့ အတွက် ဆောင် ရမယ့် အခွန်နဲ့ တွက်လိုက်ရင် သိန်း ၆၀၀ မှသည် သိန်း ၁၀၀၀ ဝန်းကျင်အထိ မြောက်သွားနိုင်ပါတယ။်
အာဆီယံနိုင်ငံထုတ် ကားများ တင်သွင်းပါက အကောက်ခွန် ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံမည်
ပင်ရင်းနိုင်ငံ လက်မှတ် ATIGA Form-D ပါဝင်သော အာဆီယံနိုင်ငံထုတ် ကားများ တင်သွင်းပါက အကောက်ခွန် ငါးရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အာဆီယံ ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူ စာချုပ် ASEAN Trade in Goods Agreement အရ တင်သွင်းသော ကားအားလုံး အတွက် အကောက်ခွန် လျှော့ပေါ့ ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
မိတ္ထီလာမြို့ရှိ လမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် မလွတ်သော ဆိုင်ခန်းများအား ၁၅ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပိတ်သိမ်း ရမည်
မိထ္တီလာမြို့ရှိ လမ်းနယ်နိမိတ်နှင့် မလွတ်သော ဆိုင်ခန်းများအား စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ထား၍ ပိတ်သိမ်းရမည်ဟု စည်ပင်မှ ညွှန်ကြားချက် ထုတ်လိုက်သောကြောင့် ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်များမှာ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း ၄င်းတို့ထံမှ သိရသည်။
Apple ကနာမည်ကြီး နောက်ထပ် ပြိုင်ဘက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Motorola ကိုဂျာမန် တရားစီရင်ရုံးမှာ မူပိုင်ခွင့်နဲ့ တရားစွဲ ခဲ့ရာ အောင်မြင်မှု ထပ်မံရရှိလိုက် ပြန်ပါပြီ။
အခုလို Apple အနေနဲ့ ဥပဒေ တရားရုံး ကိစ္စတွေနဲ့ အရမ်း active ဖြစ်နေတာ လအနည်းငယ် ကြာနေပါပြီ။ San Jose-based တရားရုံးက Apple ကို Samsung နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသာစီး ပေးလိုက်ပေမယ့် US ဈေးကွက်ကနေ Samsung Smartphones တွေ ပိတ်ပင်စေချင်တဲ့ Apple ရဲ့ ဆန္ဒကို မဖြည့်ဆည်း ပေးခဲ့ပါဘူး။ ဂျာမနီက ထွက်လာတဲ့ စီရင်ချက်ဟာ Motorola Mobility အတွက် ပြင်းထန်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အမှုထဲမှာ iOS platform ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်တဲ့ rubber-band type physics ပါဝင်ပါတယ်။ iOS developers တွေကတော့ rubber-band effect နဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးမှု ရှိမှာပေါ့။ တခြား user တွေကို ပြောပြရမယ် ဆိုရင်တော့ rubber-banding effect ဆိုတာ table view or web view အဆုံးအထိကို အတက် အဆင်း လုပ်ပေးတဲ့ဟာကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၈ ဦး ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ အမေရိကန်ပြည်ထောင် စုမှာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်တခုနဲ့ ရောက်နေပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကွန်ဂရက် လွှတ်တော်ရဲ့ လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပုံတွေ၊ အမေရိကန်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အကြောင်း၊ အစိုးရ မဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်၊ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်တို့ အကြား ဘယ်လို ဆက်စပ် လုပ်ဆောင်ကြတယ် စတာတွေကို လေ့လာပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုမှာ ဘယ်လိုပြန်ပြီး အသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတာကို ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခရီးစဉ် အတွင်း အမေရိကန် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော် အမတ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိတဲ့ထဲမှာ အထက် လွှတ်တော်အမတ် ဂျင်မ် ၀က်ဘ် (Jim Webb) လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတီခွန်မြတ်ကို သူတို့ရဲ့ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက် ပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 10:40 1 comment:
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကောလင်းမြို့ ရေကျော်ရပ်ကွက် တောင်ပိုင်း မီးရထား သံလမ်းအနီးတွင် စက်တင်ဘာ ၄ ရက်မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက ကောလင်းမြို့ စက်ရုံလယ်ပြင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ သတင်းပေး ချက်အရ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် သတင်း တပ်ဖွဲ့တို့ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့က သံလမ်းအနီး လမ်းလျှောက်နေသော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားသုံးဦးအား ဖမ်းဆီးရမိသည်။
ဘင်္ဂလီ တို့ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံးသူ၏ နောက်ဆုံး ခရီး ညီညွတ်စွာ ပို့ဆောင်
ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသော သူအားမြေချစဉ် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးခဲ့သူများဖြင့် စည်းကားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ထို့သို့လိုက်လံပို့ဆောင်သူများတွင် တရားခံအားအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးစေလိုကြောင်းများအားရေးသားထားသည့် စာတမ်းပါစာရွက်များကိုလည်းကိုင်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်က ဂျူးအနွယ်ဖွား ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက အပျော်တမ်းရိုက်ကူးပြီး Youtube website မှာ တင်ထားတဲ့၊ အစ္စလမ်ဘာသာရဲ့ အထွဋ် အမြတ်ဖြစ်တဲ့ တမန်တော် မိုဟာမက်ကို လှောင်ပြောင်စော်ကား ထားတယ်လို့ စွတ်စွဲခံထားရတဲ့ The Innocence of Muslims ဆိုတဲ့ ဗီဒီယိုရုပ်ရှင် ဟာ၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ တာဝန်မဲ့စွာ ရိုက်ကူး ထားတာကြောင့် အပြင်းအထန် ပြစ်တင်ရှုံ့ချတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီကလင်တန် က ရုပ်သံလွှင့်ပြီး ကြေညာနေတာကို အခုကျနော်တို့ သတင်းကြေငြာနေစဉ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။
- အိန္ဒိယက ဓာတ်ငွေ့သင့်ခဲ့သူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်အသစ် (အသံ) click
အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ
မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော် ဆောင်ရွက်လာခဲ့တဲ့ အဝေးရောက် အမျိုးသား ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ (NCGUB) ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ စိန်ဝင်း လက်မှတ်ရေး ထိုးပြီး ဒီကနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေအရ အခုလို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ
ဖြစ်ကြောင်း ဒေါက်တာ စိန်ဝင်းက RFA ကို ပြောကြားပါတယ်။
Posted by ရွှေနိုင်ငံ at 07:58 1 comment:
နယူးယောက်စံတော်ချိန်မနက် ၆နာရီ၂၂မိနစ်။ - အီရန်နိုင်ငံမြို့တော်တီဟီရန်မြို့တွင် အမေရိကန်သံ ရုံးဖွင့်လှစ် မထားသော်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံကိစ္စဖြေရှင်းပေးသည့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသံရုံးရှေ့တွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဦးဆောင်ကာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ လုံခြုံရေးရဲများစောင့်ကြပ်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။
ပြည်တွင်းပြန် နိုင်ငံခြားသား ခံယူထားသူများ၏ နိုင်ငံရေး ကစားကွက် နေရာ
လူသတ်မှုနှင့်ပက်သက်ပြီး ကွဲလွဲမှုများကြောင့် အသတ်ခံရသူ ဒေါ်မေနှင်းဆီဟန်၏ခင်ပွန်း ရဲမှူးဦးမျိုးချစ်ထွန်း (အငြိမ်းစား)မှ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ စာတစ်စောင်ပေးပို
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အတွင်း အငြိမ်းစားရဲမှူး၏ဇနီးသည် သတ်ဖြတ်ခံရမှုတွင် တရားခံဟု ယူဆရ သူအား နှစ်ရက်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပေမယ့် ယင်းဖမ်းဆီးရမိမှုတွင် အဖြစ်မှန်နှင့် အနည်းငယ် ခြားနားချက်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အားနည်းချက်များရှိနေသဖြင့် အသတ်ခံရသူ၏ ကာယကံရှင် မိသားစုတွင် နစ်နာမှုများရှိကြောင်း ၊ အသတ်ခံရသူ ဒေါ်မေနှင်းဆီဟန်၏ခင်ပွန်း ရဲမှူးဦးမျိုးချစ်ထွန်း (အငြိမ်းစား) က စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက် ရက်စွဲဖြင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Israel အမျိုးသမီး တစ်ယောက် Palestine ကောင်လေးကို ကာကွယ်ခဲ့တဲ့ သတင်းဟာ ကမ္ဘာ့ လူသား သန်းပေါင်းမြောက်များစွာကို အမြင်သစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုမျှမက နှစ်ပေါင်းများစွာ ရန်သူလို ဆက်ဆံနေခဲ့ကြတဲ့ Israel နဲ့ Palestine ကြားမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆေးတစ်ခွက်လဲ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကလေးမြို့ သမ္မတ ထောက်ခံ ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ဒေသခံ လူထု တစ်သောင်းကျော် ပါဝင် အင်အားဖြည့်
မန္တလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သမ္မတ ထောက်ခံ ဆန္ဒပြမှု အပြီး ကလေးမြို့တွင်လည်း သမ္မတထောက်ခံ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ပွဲကို ယနေ့ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒေသခံ လူထု တစ်သောင်းကျော် ပါဝင် အင်အား ဖြည့် ခဲ့ကြကြောင်း ဒေသခံများ ထံမှ သိရသည်။